पाकिस्तानमा हिन्दु आस्थामाथि बर्बर आक्रमण, मुसलमानहरुले हिन्दु सन्तको समाधीस्थल पनि छोडेनन्, ध्वस्तै पारे!Nepalpana - Nepal's Digital Online
बिहिवार, फाल्गुण २० गते २०७७
२०७७, फाल्गुण २० गते
पाकिस्तानमा हिन्दु आस्थामाथि बर्बर आक्रमण, मुसलमानहरुले हिन्दु सन्तको समाधीस्थल पनि छोडेनन्, ध्वस्तै पारे!
Nepal Pana पौष १६ २०७७
इस्लामावाद । इस्लाम राष्ट्र पाकिस्तानमा हिन्दु धर्ममा आस्था राख्नेमाथि पहिलेदेखि नै हमला हुँदै आएको छ ।
हालैमात्र एक हिन्दु सन्तको समाधीस्थल पाकिस्तानका मुसलमानहरुले आक्रमण गरेका छन् । मानवीय संवेदनालाई समेत ख्याल नगरी धर्मका नाममा असहिष्णुता देखाएका हुन् । स्थानीय मुसलमानहरुले पाकिस्तानको खैबर पख्तुनख्खा प्रान्तको काराक जिल्लामा अवस्थित हिन्दु सन्त श्री परम हंसजी महाराजको ऐतिहासिक समाधिस्थल ध्वस्त पारिदिएका हुन् ।
स्थानीय प्रहरीका अनुसार काराक जिल्लाको टेरी गाउँमा एक हिन्दु नेताले बनाउन लागेको घरको विषय त्यसमा जोडिएको थियो । उनले बनाउन लागेको घर उक्त समाधिस्थलमा जोडिएको भन्दै स्थानीय भीड आक्रोसित भएको थियो । काराक जिल्लाका प्रहरी प्रमुख इरफानउल्लाह मारवाटले बीबीसीका प्रतिनिधि सिराजुद्धिनलाई बताएअनुसार त्यहाँ हिन्दुहरुको जनसंख्या अत्यन्तै कम छ ।
स्थानीयवासीले उक्त घर निर्माण भैरहेको स्थान समाधीस्थलको हिस्सा भएको दाबी गरिरहेका छन् ।
प्रहरी प्रमुखका अनुसार एकजना धर्मगुरुले उत्तेजनात्मक भाषण गरेर स्थितिलाई बिगारेका थिए । त्यसपछि भीड यति विशाल हुँदै गयो कि परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन निकै गाह्रो भएको थियो । यद्यपि, घटनामा कसैलाई पनि चोट नलागेको प्रहरीको दाबी छ । हिन्दु सन्त श्री परम हंसजी महाराजको समाधिस्थलका सम्बन्ध यसअघि पनि विवाद भएको थियो । त्यस क्षेत्रका कट्टरपन्थी मानिहरुले शुरुदेखि नै यस समाधिस्थलको विषयमा विरोध गरिरहेका थिए ।
यसअघि सन् १९९७ सालमा सोही समाधिस्थलको विषयलाई लिएर स्थानीयवासीले पहिलोपटक आक्रमण गरेका थिए । त्यसपछि पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि खैबर पख्तुनख्वाको प्रान्तीय सरकारले यसको पुनर्निर्माण गरेको थियो । यो समाधिस्थल सरकारी ट्रस्टको सम्पति हो ।
हिन्दु सन्त श्री परम हंस जी महाराजको मृत्यु भएको ठाउँमा निर्माण गरिएको थियो । सन् १९१९ मा सोही ठाउँमा सन्तको अन्त्येष्टि गरिएको थियो । त्यसपछि उनका अनुयायीहरुले यहाँ वर्षौदेखि पुजापाठ गर्दै आएका थिए ।
पौष १६, २०७७ बिहिवार १२:५१:१६ बजे : प्रकाशित
अविश्वको प्रस्ताव लैजान डरायो प्रचण्ड समुह, भीम रावलले गरे यस्तो घोषणा !
केपी ओलीको पक्षमा राजेन्द्र महतोको दमदार कुरा सुनेर तर्सिए प्रचण्ड र माधव, गच्छदारलाई पनि छोडेनन्
किसानको गहुँ बालीमा डोजर चलाउने मेयर मन्त्री प्रभु साहकी पत्नी भएको खुलासा, पर्दाफास भएपछि मन्त्री तनावमा
भीम रावललाई माधव नेपालको काउन्टर, झलनाथ र प्रचण्ड पनि मिल्दा एक्लिए डाक्टर रावल !
ओली शक्तिकाे कमाल : अविश्वासकाे प्रस्ताव फिर्ता, प्रचण्ड समुह ओलीको पक्षमै !
जुनसम्म सिमाना बन्द !
‘कांग्रेस विभाजितसँग होइन सिङ्गो नेकपासँग भिड्न तयार’
ललितपुर र सिन्धुपाल्चोकमा सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि भारतले दियो साढे २४ करोड
राजनीति जटिल बन्दै गइरहेका बेला देशभरबाट जर्नेलहरुलाई किन बोलाइयो जंगी अड्डा?
हङकङ मिडियाको शेयर कब्जा गर्दै चिनियाँ धनाढ्य